ရွှေဘောလုံးဆုကို ဗန်ဒိုက်မရရှိမှုအပေါ် ဒေါသထွက်နေကြတဲ့ လီဗာပူးလ်ပရိသတ်များ - MySport Myanmar
ရွှေဘောလုံးဆုကို ဗန်ဒိုက်မရရှိမှုအပေါ် ဒေါသထွက်နေကြတဲ့ လီဗာပူးလ်ပရိသတ်များ
ပရိသတ်တွေအားလုံး စောင့်မျှော်ခဲ့ကြရတဲ့ ရွှေဘောလုံးဆုပေးပွဲကြီးကတော့ ပြီးဆုံးသွားခဲ့ရပြီး သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ ၂ဝ၁၈-၂၀၁၉ဘောလုံးရာသီအတွက် အကောင်းဆုံးကစားသမားအဖြစ် ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ကစားသမား လီယွန်နယ်မက်ဆီက သတ်မှတ်ခံခဲ့ရကာ ရွှေဘောလုံးဆုကို ဆွတ်ခူးသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ယခုတစ်ကြိမ်ရရှိမှုကြောင့် မက်ဆီဟာ သမိုင်းတစ်လျှောက် ရွှေဘောလုံးဆုကို အများဆုံး ရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ ကစားသမားအဖြစ် ခြောက်ကြိမ်နဲ့အတူ မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။
မက်ဆီဟာ ရွှေဘောလုံးဆုကို ရရှိဖို့အတွက် လီဗာပူးလ်အသင်းနဲ့အတူ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားကို ရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ နောက်ခံလူဗန်ဒိုက်ကို အထူး ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရပြီး နောက်ဆုံးမှာတော့ ဗန်ဒိုက်ကို ကျော်ဖြတ်ကာ ရွှေဘောလုံးဆုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ယခုနှစ်ပြိုင်ပွဲမှာ မက်ဆီရွှေဘောလုံးဆုကို ရရှိခဲ့တဲ့အပေါ် လီဗာပူးလ်အသင်းရဲ့ပရိသတ်တွေက တရားမျှတမှုမရှိတဲ့လုပ်ဇာတ်ကြီးလို့ အမည်တပ်ပြီး ဝေဖန်နေကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
လီဗာပူးလ်အသင်းပရိသတ်တွေက မက်ဆီဟာ ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ကစားသမားဖြစ်တာကြောင့် ဒီဆုကိုရရှိခဲ့တာလို့ စွပ်စွဲပြောဆိုနေကြပြီး ဗန်ဒိုက်ကသာ ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ ကစားသမားဖြစ်ခဲ့ရင် ဗန်ဒိုက်ကပဲဆုရရှိလိမ့်မယ်လို့ ဝေဖန်နေကြပါတယ်။ လီဗာပူးလ်အသင်းပရိသတ်တွေရဲ့ ဝေဖန်စကားတချို့ကို ပြန်လည်ဝေမျှရမယ်ဆိုရင်တော့….
” ဗန်ဒိုက်သာ ဘာစီလိုနာအတွက် ကစားပေးရင် ရွှေဘောလုံးဆုကို သူရမှာ သေချာတယ် ”
” ဗန်ဒိုက်က ၂ဝ၁၉ရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားပဲ… ဒါကို ဆုနဲ့လွဲခဲ့တာဆိုတော့ ဒါက လုပ်ဇာတ်ကြီးပဲ… ”
” ဗန်ဒိုက်ဆုမရခဲ့တာက တကယ့်ကို ဟာသပဲ… ”
ပရိသတျတှအေားလုံး စောငျ့မြှျောခဲ့ကွရတဲ့ ရှဘေောလုံးဆုပေးပှဲကွီးကတော့ ပွီးဆုံးသှားခဲ့ရပွီး သတငျးတှထှေကျပျေါခဲ့တဲ့အတိုငျးပဲ ၂ဝ၁၈-၂၀၁၉ဘောလုံးရာသီအတှကျ အကောငျးဆုံးကစားသမားအဖွဈ ဘာစီလိုနာအသငျးရဲ့ကစားသမား လီယှနျနယျမကျဆီက သတျမှတျခံခဲ့ရကာ ရှဘေောလုံးဆုကို ဆှတျခူးသှားနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ယခုတဈကွိမျရရှိမှုကွောငျ့ မကျဆီဟာ သမိုငျးတဈလြှောကျ ရှဘေောလုံးဆုကို အမြားဆုံး ရယူနိုငျခဲ့တဲ့ ကစားသမားအဖွဈ ခွောကျကွိမျနဲ့အတူ မှတျတမျးဝငျခဲ့ပါတယျ။
မကျဆီဟာ ရှဘေောလုံးဆုကို ရရှိဖို့အတှကျ လီဗာပူးလျအသငျးနဲ့အတူ ခနျြပီယံလိဂျဖလားကို ရယူနိုငျခဲ့တဲ့ နောကျခံလူဗနျဒိုကျကို အထူး ယှဥျပွိုငျခဲ့ရပွီး နောကျဆုံးမှာတော့ ဗနျဒိုကျကို ကြျောဖွတျကာ ရှဘေောလုံးဆုကို ရရှိခဲ့ပါတယျ။ ယခုနှဈပွိုငျပှဲမှာ မကျဆီရှဘေောလုံးဆုကို ရရှိခဲ့တဲ့အပျေါ လီဗာပူးလျအသငျးရဲ့ပရိသတျတှကေ တရားမြှတမှုမရှိတဲ့လုပျဇာတျကွီးလို့ အမညျတပျပွီး ဝဖေနျနကွေတယျလို့ သိရပါတယျ
လီဗာပူးလျအသငျးပရိသတျတှကေ မကျဆီဟာ ဘာစီလိုနာအသငျးရဲ့ကစားသမားဖွဈတာကွောငျ့ ဒီဆုကိုရရှိခဲ့တာလို့ စှပျစှဲပွောဆိုနကွေပွီး ဗနျဒိုကျကသာ ဘာစီလိုနာအသငျးရဲ့ ကစားသမားဖွဈခဲ့ရငျ ဗနျဒိုကျကပဲဆုရရှိလိမျ့မယျလို့ ဝဖေနျနကွေပါတယျ။ လီဗာပူးလျအသငျးပရိသတျတှရေဲ့ ဝဖေနျစကားတခြို့ကို ပွနျလညျဝမြှေရမယျဆိုရငျတော့….
” ဗနျဒိုကျသာ ဘာစီလိုနာအတှကျ ကစားပေးရငျ ရှဘေောလုံးဆုကို သူရမှာ သခြောတယျ ”
” ဗနျဒိုကျက ၂ဝ၁၉ရဲ့အကောငျးဆုံးကစားသမားပဲ… ဒါကို ဆုနဲ့လှဲခဲ့တာဆိုတော့ ဒါက လုပျဇာတျကွီးပဲ… ”
” ဗနျဒိုကျဆုမရခဲ့တာက တကယျ့ကို ဟာသပဲ… “
MySport Myanmar2019-12-03T10:07:36+06:30December 3rd, 2019|Football, La Liga, Premier League, World|